Mamwe maapplication anotanga kupa XL majeti ePados 15 | IPhone nhau
Mamwe maapplication anotanga kupa XL majeti ePados 15
Ngirozi Gonzalez | 24/09/2021 20:00 | IPhone maapplication, iOS 15
iPadOS 15 yawedzera iyo kubudirira yeiyo inoshanda sisitimu nekuremekedza IPOSOS 14. Kubatanidzwa kweraibhurari yeapp kana kuita multitasking kwakagadzirwazve kwaita kuti kushanda kweiyo iPad kuve kwakanyanya kushanda uye panguva imwechete nekukurumidza uye kunobatsira mushandisi. Imwe nzira itsva yasvika ndeye XL zvipenga, yakakura inobvumidza kuratidza rumwe ruzivo rwemarudzi ese uye kuti vagadziri vanogona kugadzira kwavo kunyorera. Saizvozvo, mazhinji maapplication ari kugadzirisa uye kuburitsa iwo avo majeti mune XL fomati senge Zvinhu 3, Inonakidza kana CARROT Mamiriro ekunze.
Zvimwe zvirimo pane XL majeti ePadad ane iPadOS 15
Iwe unogona ikozvino kuisa majeti pakati pemapurogiramu pane yako iPad. Iwo zvakare anowanikwa mune yakakura saizi kuti utore zvizere iyo skrini.
Zvinhu 3 ndeimwe yeakanyanya kurodha pasi ekugadzira zvigadzirwa paApp Store. Mazuva mashoma apfuura yakagadziridzwa kuti ishandure 3.15 uye ikaburitsa zvinhu zvitsva zvemidziyo ine iOS 15 uye iPadOS 15. Wayo XL majeti eiyo iPad anowanikwa mune iyi vhezheni. Zviri nezve widget Ipapo uye imwe yacho inopa yakasarudzika runyorwa kuti uone zvimwe zvirimo nezve edu zvinyorwa.
Mukungotarisa chete tinogona kuona zvinyorwa zvedu pamwe chete nechidzitiro uye nekuzviwana uye nekudyidzana nezvinhu kubva kuchiratidziro chekumba. Uye zvakare, aya majeti anogona kushandurwa maererano neTimu yavo kana kuwana zvakananga kugadzirwa kwemabasa matsva.
Zvinhu 39,99 €
YouTube yakazivisawo ayo XL majeti ePadOSOS 15. Pamusoro peYouTube, ivo vanowana zvakare maGoogle Widgets matsva. Vachave vachiwanikwa mumazuva anouya uye vachange vaine zvakafanana mashandiro seaya atove kuwanikwa nhasi asi muhombe kukura. Panyaya yeYouTube, inotibvumidza kuti tisvike munguva pfupi yapfuura mimhanzi, maartist uye maalbum. Muchiitiko cheGoogle Mifananidzo, tinogona kuve nemifananidzo yatinoda muhukuru hukuru kuti tipe kubata kwekubata kune yedu iPad.
Flexibits maapuro akagashirawo mawijeti matsva. Muchiitiko cheFantastical, unogona kuwana karenda yakakura kwazvo ine chikamu chakakosha umo zviitiko zvese zvakamisikidzwa nechikamu chinoenderana uye karenda zvinowoneka. Uye zvakare, iyo inobvumidza kuwana kumisangano yeterevhizheni ine Push yebhatani.
Uine kodhi yemavara, Fantastical inokutendera kuti utore mazuva evhiki zvichibva pazviitiko zvaunazvo uye nekubatikana kwaunenge uri mumazuva iwayo. Neaya maWidgets eXL izvi zvemukati zvinogona kuwanikwa zvirinyore uye zvinoonekwa.
Inoshamisa - Karenda & Mabasavakasununguka
Pekupedzisira isu tine CARROT Weather, imwe app yekutarisa mamiriro ekunze. Kuburikidza nemifananidzo uye mifananidzo yemarudzi ese inoitirwa kupa zvakakwana mamiriro ekunze. Nechivandudzo chitsva, maviri XL majeti akawedzerwa ayo anogona kuvandudza mashandiro ayo neruzivo rwakawanda kuburikidza nePrimiyamu uye Ultra kunyoreswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Mamwe maapplication anotanga kupa XL majeti ePados 15
Apple Watch Series 7 inopa 60,5 GHz isina waya kufambisa data asi haina kuvhurika